(ဓာတ်ပုံနဲ.ဓာတ်ပုံပါစာသားတွေကတော့ ဖင်ကြီးတဲ့မော်ဒယ်မနဲ.မင်းသမီးတွေကိုကြည့်ပြီး တံတွေးတစ်မြိုမြိုဖြစ်နေရှာတဲ့ တတိယအရွယ်ရောက်ဒုတိယဝေဒနာသည်တစ်ဦးရဲ.မှတ်ချက်ပါ၊ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်မဆို တိုင်းပြည်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းရှိ မရှိဆိုတာကိုတော့ တာဝန်ပေးကြည့်မှသိမှာပါဘဲ။ ဘယ်လိုတာဝန်ပေးမလဲဆိုရင် မဲပေးပြီးအစိုးရဖွဲ. အုပ်ချုပ်ခိုင်းလိုက်ဖို.ပါဘဲ။ လီကွမ်ယူးဟာ ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရက်စက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုလည်း မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ဖို.မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စင်္ဂပူဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲအာဏာရှင်စံနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ် ဆိုတာ လီ မင်းဆက်သမဏိရှည်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအကွက်ချထားတဲ့ အဆင့်ဆင့်ဆက်ခံဆင်းသက်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို.လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတော့ ပြည်သူလူထုက ဟေ့-ဆင်းပါ ဆိုတာနဲ. အိတ်ဆွဲပြီးဆင်းသွားကြမယ့်လူစားတွေပါ။
မိမိတို.ကိုယ်ကျိုးရှာ တစ်ကိုယ်ကောင်း သားဝမယားဝစီမံချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို.အတွက် ဒေဝဒတ်နဲ.စိဉ္စမာန စပ်ကျသောဒိုင်ယာလော့ခ်တွေသုံးပြီး အာဏာကိုဆက်ထိမ်းထားမှာမဟုတ်တာတော့ ဧကန်မုချပါဘဲ။
ဘယ်သူ.ကိုမှမနာစေချင်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်လည်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပုန်ကန်သူတွေရှိကြပါသေးတယ် ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်
- ဓမြဂိုဏ်းရဲ. အောက်ဆွဲ ဘောမ အရိုးကိုက် ဖိနပ်တိုက် ခွေးကတက်အိပ်တွေရယ်
- ပူးတွဲပါပုံနဲ.စာကိုရေးတဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းနဲ.အပြင်ကဝေဒနာသည်တွေရယ်
- ကလေကဝစွမ်းအားရှင်တွေရယ် တို.ဖြစ်ကြပါတယ်။
အပြုတ်တိုက်၊အပြတ်ရှင်း ဆိုတဲ့မူကိုလက်ကိုင်ထားတဲ့ အာဃာတသမားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်မလာခြင်းဟာ ဗိုလ်လှဆွေအပါအဝင်စစ်အုပ်စုဓမြဂိုဏ်းနဲ. အပေါင်းအပါအားလုံးအတွက် အလွန်တရာကံကောင်းနေသေးတဲ့အချက်ဖြစ်နေတာပါ။
အကယ်၍သာအတိုက်အခံဟာ စစ်အုပ်စုဓမြဂိုဏ်းကိုထပ်တူစိတ်မျိုးထားခဲ့တယ်ဆိုရင် ဗိုလ်လှဆွေနဲ. စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ.မယားတွေ ခုလောက်ဆိုမုဆိုးမဖြစ်ပြီး နှစ်လည်ဆွမ်းတွေ သွတ်နေရလောက်ပါပြီ။ မွေးထားတဲ့ကလေးတွေ လူတောတိုးဖို.၊ နိုင်ငံခြားသွားစာသင်ဖို.ဆိုတာမျိုးတွေလည်း အိပ်မက်တောင်မမက်လိုက်ကြပါနဲ.။
သားရေပေါ်အိပ်သားရေနားစားတဲ့သူတွေကတော့ ကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုဟောပြောပြသ နေငြားလည်း အပင်းကိုတယောထိုးပြသလို ဘာမှအရာထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တဖက်ပိတ်တွေကိုး။ ပိုအရေးကြီးတာက
- တုန်.ပြန်ပေးဆပ်ဖို.ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည် ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပါဘဲဗျာ။
ပေါက်လွတ်ပဲစားပြောနေတဲ့ ဝေဒနာသည်လည်းမိမိကိုယ်ကို သိမြင်နားလည်သူဖြစ်လျက် ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို.တံတွေးခွက်တွင်ပက်လက်မြောရမည့်အဖြစ်ကနေ ကင်းလွတ်ပါစေဗျာ ... ။ ။
BY YeYint Nge ... 3/25/2015
မကွေးနည်းပညာကျောင်းသားများ လက်ပတ်နက်ဝတ်၍ စာမေးပွဲေ...
ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများကို အချိန် ၅ မိနစ်ခန့် ...